ထူးဆန်းထွှေလာ – Thutastar
ဒီနေ့ခေတ်နည်းပညာရပ်ဝန်းမှတော့ AI ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုအဘက်ဘက်မှကြားနေရပါပြီ။ AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာကလည်းတစ်နေ့တစ်ခြားတိုးတတ်လာခဲ့ပါတယ်။ Googleရဲ့ AI စနစ်ကတော့ လူနာတွေရဲ့ သေဆုံးမည့်ရက်ကိုခန့်မှန်းပေးနိုင်တော့မှာပါ။ Google ရဲ့ AI စနစ်ကဘယ်လောက်တောင်စွမ်းမလဲဆိုတာ တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ရအောင်…။ Google ဟာ စတမ်းဖိုဒ်တက္ကသိုလ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဆေးရုံမှလူနာများရဲ့သေဆုံးရက်ကို AI နည်းပညာသုံးပြီး ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အံသြဖို့ကောင်းတာက တွက်ချက်မှုတွေဟာ (၉၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို မှန်ကန်နေတာဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေထက် နှစ်ဆကျော်ကျော်လောက် မှန်ကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၃) လမှ (၁) နှစ်အတွင်းရှင်သန်ရမည့်လူနာ လေးသောင်းကျော်ကို AI သုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အချိန်မှာ လည်း ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လူနာတွေရဲ့ကင်ဆာရောဂါက်ိုပါ ဆရာဝန်တွေထက်ပိုမြန်အောင် လေ့လာသိရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီး Googleကဆိုထားပါတယ်။ Google ရဲ့AI နည်းပညာကတော့ တော်တော်လေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ခေတ်သစ်နည်းပညာလောကနဲ့ ဆေးပညာရပ်ဝန်းမှာတော့ Google ရဲ့ AI က
သွေးပျက်လုမတတ် ထိတ်လန့်သွားတဲ့ ကြီးစွာသော ထိတ်လန့်မှုကြီး
သွေးပျက်လုမတတ် ထိတ်လန့်သွားတဲ့ ကြီးစွာသော ထိတ်လန့်မှု ယခင်က သံဃာတွေ တစ်နှစ်ငါးသောင်းခန့် လူထွက်တယ် သံဃာတွေလျော့လာတယ်နယ်မြို့ စာသင်တိုက်တွေမှာ သံဃာမရှိတော့ဘူးလို့ ပါးစပ်ပြောနဲ့လဲကြားရ fbမှာလဲ တွေ့ရနဲ့ တွေ့ရကြားရပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မဖြစ်သလိုပါပဲ ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ပါးနှင့်အတူ မော်လမြိုင်က ကျောင်းတိုက်တစ်တိုက်ရောက်ခါမှ ကိုယ်တွေ့ကြုံပြီး ကြီးစွာထိတ်လန့်မိပါရဲ့ မိမိရောက်ရှိသော ကျောင်းတိုက်သည် ယခင်က သံဃာ ရာနဲ့ချီရှိသော စာသင်တိုက်တစ်ခု လွန်ခဲ့သော သုံးလေးနှစ်ခန့်ကမှ လျော့လျော့လာလိုက်တာ ဒီနှစ် သံဃာအရေအတွက် ဆရာတော်အပါအဝင် လက်ဆယ်ချောင်းမပြည့်တော့ ကျောင်းတိုက်အဆောက်အဦးပြည့်စုံလွန်းသည် ခံ့ငြားထည်ဝါသည် သို့သော် နေမည့်သံဃာမရှိတော့ ကျောင်းကြီးအောက် ဝင်ကြည့်တော့ လူမနေသည့် ကုဋင် တွေက အပြည့် လက်ချိုးရေတွက်ကြည့်တော့ ကုဋင် ၄၅ လုံး သို့သော် တစ်လုံးမှ နေမည့်သူမရှိ သြော်
မည်သည့် ဓါးနဲ့လှီးလှီး ဓါးအရာတောင်မထင်.. တုတ်ပီး၊ ဒါးပီး၊ သေနတ်ပီးတဲ့ နွား (၉)လုံးကျည်နဲ့ပစ်တာ.. တာင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့
Comments Off on မည်သည့် ဓါးနဲ့လှီးလှီး ဓါးအရာတောင်မထင်.. တုတ်ပီး၊ ဒါးပီး၊ သေနတ်ပီးတဲ့ နွား (၉)လုံးကျည်နဲ့ပစ်တာ.. တာင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့
မည်သည့် ဓါးနဲ့လှီးလှီး ဓါးအရာတောင်မထင်.. တုတ်ပီး၊ ဒါးပီး၊ သေနတ်ပီးတဲ့ နွား တုတ်ပီး၊ဒါးပီး၊ သေနတ်ပီးတဲ့နွား… ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကဘီခရိုင် အောင်လိမြို့တွင် နွားတကောင်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မြက်မစား ပဲ ရော်ဘာပျိုးပင်လေးတွေကိုက်စား..ငှက်ဗျော်ဖူးတွေစားပြီးကြီးလာတယ်… ကြာတော့ ရွာသားတွေဟာ ရော်ဘာပျိုးပင်လေးတွေကိုက်စားတာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကိုမခံနိုင် နွားပိုင်ရှင်ကလျော်ကြေးပေးရနဲ့ ဆက် မမွေးတော့ပဲဒီနွားကိုသတ်ပြီးအမဲသားလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် နွားဟာ ဘယ်လိုလည်လှီးလှီး ဒါးရာလေးတောင်မထင်. လည်မြို၊. ဝမ်းဗိုက်တို့ကို သံချွန်နဲ့ထိုးလည်း မပေါက်ဘူး… သေနတ်နဲ့ပစ်လည်းကျည်ဆန်ရာပဲ့ထင်တယ်မပေါက်ဘူး…နောက်ဆုံး(၉)လုံးကျည်နဲ့ပစ်တာ.. တာင် ဘာမှမဖြစ်… ကြာလာတော့ နွားပိုင်ရှင်လည်း သူ့နွားကိုသနားပြီး ကဘီမြို့ပေါ်က ဘန်းထုံးစတ်တိထမ်ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆရာတော်ဆီ သွားလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်..။ ဆရာတော်ဆီရောက်တာတောင် နွားကိုစမ်းချင်သူတွေလာသေးတယ်တဲ့ ဆရာတော်ကတော့ ဒီနွား ဟာကျောင်းပိုင်နွားဖြစ်ပြီမို့ တိရိစ္ဆာန်ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြစ်တယ်… လုံးဝမစမ်းသံခံတော့ဘူး…အခုဆို ထိုင်းနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှလူတွေဒီနွားကိုလာကြည့်ကြတယ်..မြက်ကျွေးရင်မစားဘူး..ငှက်ဗျော်သီးပဲ့စားတယ်တဲ့… Boon Myo Myo =================
Comments Off on ဂျပန်ဘုရားကျောင်းတွင် နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ပြသအပူဇော်ခံထားခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်အတွင်း ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များစွာကို တွေ့ရှိ
ဂျပန်နိုင်ငံက ရှေးဟောင်းဘုရား ကျောင်းတွေအများအပြားတည်ရှိရာ နာ ရာမြို့ရဲ့ ဟော့ကီဂျီဘုရားကျောင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ကျော်လောက် ပြသအပူ ဇော်ခံထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ဟောင်း တစ်ဆူအတွင်းမှာ ရှေးဟောင်းအမွေအ နှစ် ၁၈၀ကျော်ခန့် သိမ်းဆည်းထားခဲ့တာ ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ နာရာအမျိုး သားတက္ကသိုလ်ရဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသီ အဖွဲ့က ဒီဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကို စကင်ဖတ် စစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ကြရာမှာ ရှေးဟောင်း စာလိပ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ခန့်နဲ့ အခြား ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ ဆင်းတုတော် တွင်းမှာ ဌာပနာထားတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြ တာဖြစ် ပါတယ်။ ဆင်းတုတော်တစ်ခု တည်းမှာ ခုလို ရှေးဟောင်းစာလိပ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာပါရှိနေတာက ရှားပါးတဲ့ဖြစ် ရပ်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က တောင် ဒီဆင်းတုတော်ထဲက စာလိပ်တွေ အကြောင်း စိုးစဉ်းမျှမသိရှိတာကြောင့် ဒီ စာလိပ်တွေက
ရှေ့ရေးကို ကြိုမသိကြဘဲ ဝေလငါးသေကြီးကို ၀ိုင်းဝန်းစားသောက်နေတဲ့ သနားစရာ ပိုလာဝက်ဝံများ
Comments Off on ရှေ့ရေးကို ကြိုမသိကြဘဲ ဝေလငါးသေကြီးကို ၀ိုင်းဝန်းစားသောက်နေတဲ့ သနားစရာ ပိုလာဝက်ဝံများ
ရှေ့ရေးကို ကြိုမသိနိုင်ဘဲ ဝေလငါးသေကို ၀ိုင်းဝန်းစားသောက်နေတဲ့ သနားစဖွယ် ပိုလာဝက်ဝံများ အာတစ်သမုဒ္ဒရာမှာရှိတဲ့ ရုရှားပိုင် ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာ ပိုလာဝက်ဝံ အကောင် ၂၀၀ လောက် ဝေလငါးကြီးကို ၀ိုင်းဝန်းစားသောက်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ ကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာ တစ်ကိုယ်တော်သာ လှည့်လည်အမဲလိုက်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတာကြောင့် ဒီလိုအကောင် ၂၀၀ လောက် တစ်စုတစ်စည်းထဲ တွေ့မြင်လိုက်ရခြင်းဟာ လုံးဝထူးခြားတဲ့ အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Wrangel ကျွန်း၊ ဘေးမဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာအတွင်း ကမ္ဘာလှည့်များက အဆိုပါမြင်ကွင်းကို ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါ။ ယခုနှစ်မှာ ပိုလာဝက်ဝံတွေ အချိန်တော်တော်များများ နေထိုင်လေ့ရှိတဲ့ ရေခဲပြင်ဟာ အချိန်စောပြီး အရည်ပျော်လာတာကြောင့် မြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်ချိန် ပိုများလာမယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ နောက်ထပ် ပိုလာဝက်ဝံတွေ ထပ်ရောက်လာစရာရှိပြီး
ငှက်လူသားလို့ အခေါ်ခံနေရတဲ့ သနားစရာ ကလေး
Comments Off on ငှက်လူသားလို့ အခေါ်ခံနေရတဲ့ သနားစရာ ကလေး
သနားပါတယ် ကလေးလေးရယ် ဘာဝဠ်ကြွေးရှိလို့လဲကွယ်….. ဌက်လူသားလို့ခေါ်ကြတယ် ခရီးသွားတစ်ယောက်က လမ်းမှာတွေ့ရင်း ပုံကြိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်လာပါတယ်။ အသက်ကတော့ ၈ နှစ်လို့ သိရပါတယ်။ Unicode သနားပါတယျ ကလေးလေးရယျ ဘာဝဠျကွှေးရှိလို့လဲကှယျ….. ဌကျလူသားလို့ချေါကွတယျ ခရီးသှားတဈယောကျက လမျးမှာတှရေ့ငျး ပုံကွိုကျပွီး Facebook ပျေါတငျလာပါတယျ။ အသကျကတော့ ၈ နှဈလို့ သိရပါတယျ။ Credit – Nay Win Aung
နိုင်လူ ပြောပြတဲ့ အမြန်လမ်း ပေါ်ကထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရပ်
Comments Off on နိုင်လူ ပြောပြတဲ့ အမြန်လမ်း ပေါ်ကထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရပ်
နိုင်လူ ပြောပြတဲ့ အမြန်လမ်း ပေါ်က အဆန်းတကြယ်ဖြစ်ရပ် သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက် အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။လူကြမ်း မင်းသား နိုင်လူ က အမြန်လမ်း ပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွားရင်း မက်ခဲ့ရတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အိပ်မက်အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ယမန်နေ့ညက ရန်ကုန် မှ မန္တလေး သို့ အလာမိုင်တိုင် ၁၄၅ အရောက်တွင် အလွန်အိပ်ချင်လာသောကြောင့် လမ်းဘေးတွင် ကားထိုးရပ်ပြီး အိပ်ရာ ၁နာရီလောက် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။ အိမ်မက် မက်သလို အပြင်တွင်လာပြေားသလို ကြားလိုက်ရ၍ ပြန်နိုးသွားခဲ့သည်။ လာပြောတာလား။ အိမ်မက် မက်တာလားဆိုတာကို ဝေခွဲ၍မရပါ။ မင်းတို့ လူ ၉ ယောက်ပါလာ၍ ကျောက်ခဲ့တလုံးကောက်ယူ၍ မောင်ကျောက်ခဲ့မင်းပါ လိုက်ခဲ့ဟူ၍ ခေါ်သွားပါဟု ပြောပါသည်။ အိပ်ရာမှ လန်
ခင်ပွန်းဟောင်းမှ သူဝယ်ပေးထားသောအဝတ်အစားများဖြစ်ကြောင်းပြောသဖြင့် အဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ကာ ကုန်တိုက်မှထွက်သွားသော တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး
Comments Off on ခင်ပွန်းဟောင်းမှ သူဝယ်ပေးထားသောအဝတ်အစားများဖြစ်ကြောင်းပြောသဖြင့် အဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ကာ ကုန်တိုက်မှထွက်သွားသော တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး
ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ မင်းကိုင်ထားတဲ့ဖုန်း မင်းဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေ အားလုံးငါဝယ်ပေးထားတာချည်းပဲလို့ သူ့ခင်ပွန်းဟောင်းကပြောခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လူကြားထဲမှာ ကိုယ့်နဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့လမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့ လက်တွဲဖော်ဟောင်းနဲ့မမျှော်လင့်ပဲတွေ့ရတာဟာ ။စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းလွန်းပါတယ် ။ ဒီစုံတွဲအတွက်တော့ တကယ်ကိုဆိုးရွားလွန်းတဲ့ဆုံတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့ပင်းမောမှာတွေ့ဆုံးပြီးနောက် တစ်ယောက်က အိမ်ကို ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ပြန်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ ။ Jangsu နယ်မှာရှိတဲ့ Wuxi က ရှော့ပင်းမောတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ ။ ဒေါသကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုလိုမျိုး ကမောက်ကမဖြစ်ရပ်ဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ် ။ သူတို့နှစ်ယောက်ပြတ်ဆဲသွားတဲ့နောက်မှာတောင်မှ သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းဟာ သူ့ကိုအနှောက်အယှက်ဆက်ပေးနေပြီး လမ်းမှာတွေ့ရင်လည်း ပါးရိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်သွားတာမျိုးလုပ်လေ့ရှိတယ် ။မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ အခုဒီဗီယိုကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီး တရုတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲဖြုတ်ပြီးတဲ့နောက် သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းရဲ့ငွေကြေးတစ်ပြားတစ်ချပ်မှမလိုကြောင်း အမျိုးသမီးက သက်သေပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ရှော့ပင်းမောအဝင်အဝမှာစကားများနေတာပါ ။ ဖြစ်သွားတာအရမ်းကိုမြန်ပါတယ်
Comments Off on ထူးဆန်းတဲ့ ကျောက်လိပ်ကြီးအကြောင်း
ကျောက်လိပ်ကြီး၏သမိုင်းကြောင်း။ ယခုအခါ ပြည်မြို့တစ်ဖက်ကမ်းရှိရွှေဘုံသာမုနိဘုရားအနီးရှိပရဟိတစေတီတော်တောင်ကုန်းတွင်တည်ရှိနေပါသည်။ အလှူရှင် (ကျော်လွင်ဦး)လိပ်ဘိုးဘိုးတစ်ယောက်သောကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောပါစေဟု မေတ္တာပို့ဆုတောင်းလျက် (ကျော်သူ) ကျ နော် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကသင်္ကြန် ပခုက္ကူ ပြန် ပြီး ဘုန်းကြီးဝတ် ပါတယ် ဘုန်းကြီးထွက် လို့  သူငယ်ချင်း နဲ့ ကော်ဖီသောက်ရင်း စကားစပ်မိပြီး ကျောက် ဖြစ် ရုပ်ကြွင်းလိပ် ကြီး တွေထားတယ် မင်း လိုက် ကြည့်မလားစိတ်ဝင် စားလားလို့ ပြော လို့  ပခုက္ကူနဲ့မိုင် ၄၀ ဝေးတဲ့ နေရာတစ် ခု က လျှိုကြီးတစ် ခု ထဲကို အညာနေ ပူ ပူမှာ ကျ နော်လိုက် ကြည့် မိတယ်။ ကျနော် မှာ
ကင်မရာပေါ်နှင့် တကယ့်လောကမှာ ဂြိုလ်သားများနှင့်ကြုံခဲ့ရသောဖြစ်စဉ် ၅ ခု
Comments Off on ကင်မရာပေါ်နှင့် တကယ့်လောကမှာ ဂြိုလ်သားများနှင့်ကြုံခဲ့ရသောဖြစ်စဉ် ၅ ခု
၁၆၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂြိုလ်သားတွေ့တဲ့ကိစ္စတွေ UFOတွေတဲ့ကိစ္စတွေအမြောက်အများရှိလာပါတယ်လူတွေဟာ ဒီအကြောင်းတွေကို ဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြပေမယ့်သူတို့တွေ နယ်မြေ ၅၁ ကိုရောက်ဖူးခဲ့တယ်ဆိုရင် ..ဒါမှမဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအပြာရောင်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုဖူးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတွေဟာထင်သလောက်ရူးသွပ်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်မှန်းနားလည်လာမှာပါတကယ်လို့သင်ဟာ ဂြိုလ်သားရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဂြိုလ်သားတွေကိုမြင်ရတဲ့ပြောနေတဲ့သူတွေရာနဲ့ချီရှိနေပါတယ်အခုဖော်ပြမှာကတော့ ဂြိုလ်သားတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်း ၅ ခုပဲဖြစ်ပါတယ် သင်္ချိုင်းမှဂြိုလ်သား ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ရှေးဟောင်းသင်္ချိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ မှတ်တိုင်တစ်ခုကို ဓါတ်ပုံရိုက်နေခဲ့တာပါသူရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ သတိမထားမခဲ့ပေမယ့် အိမ်ရောက်လို့မှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ခုခုထူးခြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သေးငယ်ပြီးတော့ မှတ်တိုင်နောက်မှာရပ်နေတဲ့အကောင်လေးက ဒီလူ့ကိုကြည့်နေခဲ့တာပါမီးခိုးရောင်ဆံပင်ဟာ ချိုင်းကကျောက်တိုင်နဲ့ရောနေတဲ့အတွက် ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုမမြင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ၂ ခေါင်မိုးပေါ်က သတ္တဝါ.. ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာရိုက်ထားတဲ့ မက္ကဆီကိုမြို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာလူတစ်ယောက်ဟာ ဆူညံသံတွေကြားတဲ့အတွက်အိမ်အပြင်ထွက်လာပါတယ်ကြောက်တာရောသိချင်တာရောကြောင့်လက်ထဲမှာကင်မရာယူပြီးတော့ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိရဖို့အပြင်ထွက်လာပါခဲ့တယ်သစ်ရွက်လှုပ်သံတွေကြားတဲ့အခါမှာ သူကင်မရာကို မြင်ကွင်းဆွဲကြည့်လိုက်တော့ သူ့နောက်ကနေ စူးရှကျယ်လောင်တဲ့အသံတစ်ခုထွက်လာကိုကြားရပါတယ်သူဟာနေရာမှားပြီးရိုက်ကူးနေတယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်အနောက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့ ဂြိုလ်သားလိုသတ္တဝါတစ်ကောင်ဟာ သူ့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီသတ္တဝါဟာသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီး ခဏအကြာမှာတော့ ထွက်သွားခဲ့ပါတယဒီလို နောက်ကလိုက်သွားနိုင်လောက်မရဲရင့်ခဲ့ပါဘူး ၃